Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ )
Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) ကဘာလဲ။
Cushing syndrome ဆိုသည်မှာသင်၏ခန္ဓါကိုယ်တွင် ကော်တီစောဟော်မုန်းပမာဏအချိန်ကြာမြင့်စွာမြင့်တက်လျက်ရှိသောအခြေအနေကိုခေါ်ပါသည်။ ခန္ဓါကိုယ်ကကော်တီစောများကိုများစွာထုတ်လုပ်နေသောအချိန်တွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သလိုကော်တီကိုစတီးရွိုက် သောက်ဆေးများအလွန်အကျွံသောက်မိလျှင်လည်း Cushing syndrome ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကော်တီစောများများခြင်းသည် ပုခုံးတွင်အဆီပိုများတက်လာခြင်း၊ မျက်နှာပြည့်ဝန်းခြင်း၊ အရေပြားပေါ်တွင် ပန်းရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင် အစင်းကြောင်းများ ဖြစ်ခြင်းစသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Cushing syndrome သည် သွေးတိုးခြင်း၊ အရိုးသိပ်သည်းမှုနည်းခြင်းနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံဆီးချိုအမျိုးအစား ၂ ကိုလဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Cushing syndrome ၏ကုသမှုများသည် သင့်ခန္ဓါကိုယ်၏ ကော်တီစောထုတ်လုပ်မှု ကိုပုံမှန်သို့ ပြန်ရောက်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးရောဂါလက္ခဏာများကိုသိသာစွာတိုးတက် ကောင်းမွန် လာစေပါသည်။ ကုသမှု စောစီးလေ ပြန်လည် သက်သာရန် အခွင့်အရေးပိုများလေ ဖြစ်ပါသည်။
Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပို၍အဖြစ်များပါသည်။ အသက် ၂၀-၄၀ ရှိသောလူများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမြင့်စေသောအချက်များကိုလျော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကိုထိန်းချုပ် နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသောအချက် အလက် များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ခန္ဓါကိုယ် အလယ်ပိုင်း နှင့် ကျောအပေါ်ပိုင်း၊ မျက်နှာ (လမျက်နှာ)၊ ပခုံးများကြား ( ကျွဲဘို့ကဲ့သို့) တို့တွင် အဆီတစ်ရှူးများစုပုံခြင်း
ဝမ်းဗိုက်၊ ပေါင်၊ ရင်သား နှင့် လက်မောင်းရှိ အရေပြားပေါ်တွင် ပန်းရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင် အစင်းကြောင်းများပေါ်ခြင်း
ပြတ်ရှဒဏ်ရာများ၊အင်းဆက်ကိုက်ရာများနှင့်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန် ရန် အချိန်ကြာခြင်း
Cushing syndrome ရောဂါရှိသောအမျိုးသမီးများတွင် အောက်ပါ လက္ခဏာများရှိတက်ပါသည်။
ခန္ဓါကိုယ်နှင့်မျက်နှာတွင် ထူထဲ၍ ထင်ရှားသောအမွေးအမျှင်များပေါက်လာခြင်း
ရာသီလာချိန် ပုံမမှန်ခြင်း (သို့)ရာသီမလာခြင်း
Cushing Syndrome ရောဂါရှိသောအမျိုးသားများတွင် အောက်ပါတို့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း
သွေးတိုးစဖြစ်လာခြင်း (သို့) သွေးတိုးပိုဆိုးလာခြင်း
အရိုးအားနည်းခြင်း ၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အရိုးကျိုးနိုင်ခြင်း
စောစီးစွာရောဂါအဖြေရှာခြင်းနှင့် ကုသခြင်းသည် အခြေအနေပို၍ဆိုးရွားခြင်းကိုရပ်တန့် ပေးပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤပြင်းထန် သောအခြေအနေကိုကာကွယ်ရန် ဆရာဝန်နှင့်မြန်မြန် ပြသပါ။
Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Cushing syndrome ၏ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ prednisone ကဲ့သို့သောကော်တီကိုစတီးရွိုတ် ဆေးများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစားထိုးထားသောကိုယ်အင်္ဂါ အား ခန္ဓါကိုယ်မှ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် ထိုဆေးများကိုဆရာဝန်ကပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုဆေးများကိုlupus (အရေပြားရောဂါတစ်မျိုး) နှင့် အဆစ်ရောင်ခြင်းစသောရောဂါများတွင် လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ခါးနာခြင်းကိုကုသရန်အတွက် စတီးရွိုက် ထိုးဆေးများများသုံးခြင်းသည် လည်းဤရောဂါကို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Pituitary gland အကျိတ်ရောဂါ။ ။ ဒီရောဂါတွင် pituitary gland သည် adrenocorticotropic ဟော်မုန်းကိုအများအပြားထွက်စေပါသည်။ ဒီရောဂါကို Cushing’s disease ဟုလည်းခေါ်ပါသည်။
Ectopic ACTH syndrome ။ ။ အဆုတ၊် ပန်ကရိယ၊သိုင်းရွိုက် နှင့် thymus glandတို့တွင် အကျိတ်ဖြစ်စေသောရောဂါ
Adrenal gland မူမမှန်ခြင်း၊အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း
ငါ့ဆီမှာ Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါအချက်များရှိပါကCushing syndrome ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို မြှင့်တက် စေပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း။ ။ ရက်တိုဖျားခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရခြင်း (အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်နောက်ဆုံးသုံးလ)တို့နှင့် သက်ဆိုင်သောစိတ်ဖိစီးမှုများပါဝင်သည်။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ထိတ်လန့်၍ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှု ဖိအားများခြင်း
ဤအခြေအနေများသည် သင်၏ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းတွင်ကော်တီစောပမာဏကိုတက်စေ ပါသည်။
Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Cushing syndrome ရောဂါသည် အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါ အဖြေရှာမှုသည် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းမှ ကော်တီစောပမာဏမှုမမှန်မှုအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
ပထမဦးစွာသင်၏ ဆရာဝန်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခြင်း၊ဆေးမှတ်တမ်းယူခြင်းနဲ့ရောဂါလက္ခဏာများ ကြည့်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါ ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှု များကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၂၄နာရီ ဆီးတွင်းကော်တီစော (free cortisol)ပမာဏတိုင်းတာခြင်း
ညသန်းခေါင် သွေးရည်ကြည်အတွင်းကော်တီစော နှင့် ညနှောင်းပိုင်းတံတွေးတွင်းကော်တီစောပမာဏတိုင်းတာခြင်း
ကောတီစောပမာဏရလဒ်များရပြီးသည့်နောက် ဆရာဝန်သည် ကော်တီစောထုတ်လုပ်မှု ပိုလျှံခြင်း ၏ အကြောင်းရင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းကိုသတ်မှတ်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုသောစစ်ဆေးမှုများတွင် corticotrophin releasing hormone stimulation test (ဟော်မုန်းလှုံ့ဆော်မှု စစ်ဆေးခြင်း) နှင့် dexamethasone suppression testတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် နဲ့သံလိုက်ဓါတ်မှန် ကဲ့သို့သောစစ်ဆေးမှုများလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Cushing Syndrome (ကော်တီစောများသော ကူးရှင်းရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှု ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရောဂါဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းပေါ် တွင် မူတည်ပါသည်။ adrenal gland မှကော်တီစောထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့ချပေးသောဆေးများသို့မဟုတ် pituitary gland မှ ACTH ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု ကိုလျော့ ချပေးသောဆေးများကိုဆရာဝန်ကညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ အခြားဆေးများသည် ကော်တီစောများ၏ တစ်ရှူး ပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု ကိုတားဆီးပါသည်။
သင်သည် ကော်တီကိုစတီးရွိုက် ဆေးများကိုအသုံးပြုနေရပါကဆေးပြောင်းသောက်ခြင်း၊ ဆေးပမာဏအတိုးအလျော့လုပ်ရခြင်းတို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဆေးသောက်မှုကိုသင့်သဘောဖြင့် သင် မပြောင်းလဲပါနှင့်။ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အကျိတ်ကြောင့် Cushing syndrome ရောဂါ ဖြစ်ပါကအကျိတ်ကိုခွဲစိတ်ဖယ်ရှားရပါသည် ။ အကျိတ် သည် ကင်ဆာအကျိတ်ဖြစ်နိုင်သလိုရိုးရိုးအကျိတ် လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်က ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး(သို့)ဓါတုဆေးကုထုံးတို့ကို ပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကCushing syndromeကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ အသုံးဝင်သောအချက်များသည် Cushing syndromeကိုရှောင်ရှားရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
ကောင်းကောင်းစားပါ။ ကျန်းမာသောအစားအစာများသည် အချို့ရောဂါလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ကာအချို့ကိုသက်သာစေပါသည်။
ကယ်စီယမ် နှင့် ဗီတာမင် ဒီပါသောအစားအစာများစားခြင်းသည် အရိုးများကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
ဆိုဒီယမ် နှင့် အဆီပါသောအစားအစာများစားခြင်းကိုလျှော့ပါ။
အာဟာရပညာရှင်သည် မှန်ကန်သောအာဟာရများလုံလောက်စွာရရှိရန် သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Cushing’s syndrome. http://www.healthline.com/health/cushing-syndrome#Overview1. Accessed July 20, 2016.
Cushing’s syndrome. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cushing-syndrome/manage/ptc-20197968. Accessed July 20, 2016.
Cushing’s syndrome. https://medlineplus.gov/ency/article/000410.htm. Accessed July 20, 2016.Cushing’s syndrome. http://www.healthline.com/health/cushing-syndrome#Overview1. Accessed July 20, 2016.
Cushing’s syndrome. https://medlineplus.gov/ency/article/000410.htm. Accessed July 20, 2016.